शौचालयमा जाँदा पनि सँधै स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ ? होस गर्नुस पाइल्स हुन सक्दछ - Technology Khabar
» शौचालयमा जाँदा पनि सँधै स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ ? होस गर्नुस पाइल्स हुन सक्दछ
शौचालयमा जाँदा पनि सँधै स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ ? होस गर्नुस पाइल्स हुन सक्दछ
Technology Khabar २८ आश्विन २०७६, मंगलवार
काठमाडौं । के तपाईँ शौचालयमा जाँदा पनि स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ ? शौचालयमा दिसापिसाव गरिरहेको बेला पनि स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यदि गर्नुहुन्छ भने होस गर्नुस तपाईलाई पाइल्स हुन सक्दछ ।
ट्वाइलेटमा मोबाइल प्रयोग गर्ने बानीका कारण तपाईँलाई पाइल्स रोग हुन सक्नेछ । हालै स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताहरुले ट्वाइलेटमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्नेहरुले धेरै समय बिताउने हुँदा उनीहरुलाई पाइल्सको जोखिम हुने बताएका छन् ।
अधिकांश मानिसहरुले आफू शौचालय जाँदा पनि इमेल हेर्न वा सामाजिक संजालहरुको अपडेट गर्नका लागि स्मार्टफोन साथै प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । तर केहि मानिसहरु मात्र त्यसले पार्ने खतरनाक असरको बारेमा जानकार हुने गरेको स्वास्थ्य विज्ञहरुले बताएका छन् ।
दिसा गर्ने बेलामा मोबाइल हेर्ने बानीले पाइल्सको जोखिम बढाउने बताइएको छ । मोबाइल हेर्दै दिसा गर्दा लामो समय लाग्ने र त्यसबेला मलद्धारका रक्तनलीहरुमा चाप बढ्दा पाइल्सको जोखिम बढ्ने विज्ञहरुको भनाई छ । यसले पाइल्स तथा मलद्वारमा घाउ हुने, सुन्निने र रगत बग्ने लगायतका समस्या पनि देखा पर्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुले बताएका छन्।
बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ५७ प्रतिशत बेलायतीले ट्वाइलेटमा मोबाइल प्रयोग गर्दछन् । त्यसमध्ये ८ प्रतिशतले त सँधै नियमितरुपमा ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउने गरेको बताएका छन् ।
विज्ञहरुले विशेषगरी ट्वाइलेट बस्दा धेरै समय लगाउन नहुने सुझाब दिएका छन् । उनीहरु मोबाइल चलाउनु मात्र हानिकारक नभई अरु नै कारणले लामो समय ट्वाइलेटमा बिताउने गर्नाले पनि पाइल्सको जोखिम बढ्ने बताउँछन् ।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६, मंगलवार
भीपीएन के हो? के का लागि प्रयोग हुन्छ?
अब ईमेलको पनि एक्पायरी डेट, गूगलले परिक्षण गर्दै
पेमेन्ट नेटवर्क फोन पे मा ५० हजार मर्चेन्ट आबद्ध, ‘दशैँ तिहार, क्युआरबाट व्यापार’ अफर सार्बजनिक